Forex VPS - Best Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
Top Isazi Advisors Julayi 2020 - Kuhle Forex EA sika - FX Robots
Buka i-EA Forex Forex, ukubuyekezwa nemiphumela eqinisekisiwe kanye naso ...
Isibuyekezo se-Forex Enigma EA
Intengo: $ 199 (STANDARD Package nge-2 REAL & 2 DEMO ACCOUNTS, IMIPHAKATHI YAMAHHALA NOKUSEKELA)
Qaphela: Kunamaphakeji ama-3 ahlukile we-Forex Enigma Isazi Advisor atholakalayo manje:
PowerfulForex EA ukubuyekeza
Price: $ 250 (1 selayisense, FREE Updates & UKUSEKELWA)
Amabhuya ezemali: EURUSD, AUDUSD
Qaphela: Uzothola ilayisense ye-1 ye-akhawunti yangempela ye-1, amalayisensi ambalwa we-demo nombhalo ophelele womsebenzisi!
Ukubuyekezwa kwe-PowerfulForex EA…
Ukubuyekezwa Komhwebi Onamakhono we-EA
Umhwebi Onekhono EA
Intengo: $ 497 (UMNYANGO WONYAKA OYODWA, IZIPHAKATHI ZAMAHHALA & ISIZO SOKUTHENGA ISIVIVINYO)
Amabhuthi wemali: EURUSD, GBPUSD kanye XAUUSD (Igolide)
Qaphela: Kunamaphakeji ama-3 ahlukile we-The Onekhono Umhwebi Isazi Advisor availa…
Intengo: $ 295 (Intengo ye-FXStabilizer EA AUDUSD noma i-EURUSD nge-1 UNLIMITED LICENSE, IZINSELELE ZAMAHHALA NOKUSEKELA)
Qaphela: Kukhona i-4…
Intengo: $ 270 (Intengo ye-EA ngaphandle kwe-ACCELERATOR MODE, i-1 LICENSE, UPDATES FREE & SUPPORT)
Qaphela: ISIKHALI SESIKHATHI SOKUGCINWA - $ 60 OFF - ISITOLO SOKUXHUMA: $ 297
Ukubuyekezwa kwe-Forex Diamond EA -…
Qaphela: ISIKHATHI SOKUQHAWULA ISIKHATHI - $ 110 OFF - RE…
Happy Fast Money EA Ukubuyekezwa
I-Happy Fast Money EA
Ababili bezimali: i-EURUSD, i-GBPUSD, i-EURGBP noma i-AUDUSD, i-EURCHF, i-USDCHF
Forex Real Profit EA ukubuyekeza
Price: $ 199 / Year (1 selayisense, FREE Updates & UKUSEKELWA)
Ama-pair pair: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF ne-USDJPY
I-Forex Real Incithakalo EA Review - ...
iProfit HFT MT4 EA ukubuyekeza
Intengo: $ 375 / ngonyaka (I-LICENSE YE-ANNUAL, UPDATED FREE & SUPPORT)
Ama-currency pair: EURUSD, EURJPY, AUDUSD, GBPUSD ne-XAUUSD
Qaphela: Kukhona amaphakheji ahlukile we-2 we-iProfit HFT MT4 Expert Advisor atholakalayo ngakwesokudla ...
Qaphela: ISITOLO SOKUXHUMANISA ISITOLO SAMAHHALA - 50% VALIWE - Sebenzisa IKHODI YEKHODI: 50% VPS
Ukuhweba i-Fx VPS - Kunconywe kakhulu i-Forex VPS (= Iseva yangasese ebonakalayo)
A I-Virtual Private Server (= VPS) ngokuyinhloko ikhompyutha egijima kwisiphakeli esiphethwe, ongayifinyelela ngqo ngokuxhumeka kwe-intanethi ye-PC noma ye-laptop.
A Forex VPS yenza futhi isebenze njengekhompiyutha yokuma. Ungalayisha kwakho Isazi Advisors kanye namapulatifomu wakho weMetraderra kuya ku-a Forex VPS, futhi ugijime ngokufana nalokho ozokwenza kukhompyutha yakho.
Ngokusebenzisa i Forex VPS, kukhona okulandelayo Izinzuzo ezinkulu:
Awudingi ukugcina ikhompyutha yakho ngaso sonke isikhathi.
Awudingi ukuthembela ku-intanethi noma uxhumano lwamandla ukuze i-VPS iqhubeke isebenza.
Isidlali esihle se-Forex VPS sithanda Ukuhweba Fx VPS inesikhathi sokuphumula se-99.9%.
Kungani Kufanele Usebenzise i-VPS ye-Forex ethembekile
Uma ulahlekelwa uxhumano lwakho lwe-intanethi ekhaya (ukuvela njalo kubantu abaningi), wakho Forex EA angase ahluleke ukwenza ukuhweba noma yakho Forex Robot kungenzeka ibe phakathi kokuhweba futhi kungavali kahle. Kunoma yikuphi, lokhu kungaba yindleko kakhulu. Umhlinzeki we-VPS onokwethenjelwa uxazulula le nkinga futhi kuyimfuneko kunoma imuphi umthengisi omkhulu ohlose ukugijima FX Robots. Lapho usebenzisana nakho Forex Isazi Advisors, ungaba "uhlakaniphileyo, u-pound-ubuwula."
Ekunqumeni ukuthi yikuphi Umhlinzeki we-VPS ukusebenzisa, cabanga ukuthi inikeza:
Isevisi enokwethenjelwa engahlali phansi phakathi nezinsuku.
Okungenani ubuningi bokuphelelwa yisikhathi kwe-99.9%. Futhi ikakhulukazi i-latency ephansi.
Iseva yeWindows engagqizi iseshini lapho umsebenzisi exhuma ku-VPS.
Isisombululo esiphumelelayo sezindleko
Ukuphepha okuphelele nobumfihlo.
Sicabangele lezi zici, futhi sisebenzisa Ukuhweba Fx VPS ngenxa yokuthengisa kwethu okubukhoma kanye nama-akhawunti wokuhlola we-demo.
Mayelana Nokuhweba Fx VPS - Thatha Inzuzo Yale Best Forex VPS
Ukuhweba Fx VPS bahlinzeka UNdunankulu egcizelele Virtual amaseva Private ikakhulukazi abadayisi. Inhloso ukunikeza abahwebi nge uthembeke VPS izixazululo ukubhekelela kucaciswa ukuhwebelana eziyinkimbinkimbi ezenzekelayo. Leli thimba kuqukathe ochwepheshe ahlukahlukene anazo ulwazi omkhulukazi kukhompyutha ezokuphepha, zokuxhumana kanye system nokuphathwa. Kusukela kokuqaliswa yabo, leli qembu njalo wathola ukubuyekeza Rave for inkonzo yabo ephumelelayo nobungcweti futhi ezingabizi.
Le VPS ye-Forex inikeza imishini yokuqala ye-Hewlett Packard, Dell, Intel & IBM. Ukuchithwa kwezihlinzeki ze-hardware kunciphisa ingozi ngokukhululekile kwanoma iyiphi i-hardware breakdown. Ngakho unesiqinisekiso sokuthi i-VPS yakho iyingxenye yesiphakeli esinamandla esiphezulu esiphephile. Amaseva asusiwe nge-SSD RAID10 disk isakhiwo esakhiwe ngokushayela okusheshayo kwe-SAS kanye ne-SSD. Banikeza ukufinyelela okusheshayo kwemininingwane ngamahora we-10-20 ngokushesha kunabaningi abahlinzeki bendawo abasebenzisa ama-SATA. Ngokusebenzisa i-RAID10 iqoqo le nkampani liqinisekisa ukuthi idatha yakho ye-server yangempela ngeke ihambe uma kwenzeka ukuhluleka kanzima kwedrayivu.
Amaqiniso Ngaphezulu Ngokuhweba Nge-Fx VPS - I-VPS Yethu Enconyelwe Kakhulu
Ukuhweba Fx VPS akufani nabanye abaningi abahlinzeki be-VPS abathengisa kakhulu amaseva amancane. Banikeza izinsiza eziqinisekisiwe kuzo zonke izixazululo ze-VPS. Bamukela i-Kernel Virtual Machine (KVM) ne-VMware virtualization technology.
Ngokusebenzisa uhlaka lwe-VMware lokuguquguquka, inkampani ikwazi ukuqinisekisa isiqiniseko se-100% ku-VPS yabo.
Zonke amaseva of Ukuhweba Fx VPS asezindaweni ezine ngokuma kwezwe ahlukene Data Centres - London, New York, Amsterdam kanye Frankfurt, ikakhulukazi kukhethelwe Ultra Low ubambezelo futhi ukufinyelela nabashintshi ezinkulu zomhlaba kanye zezimali abahlinzeki.
Izikhungo zedatha ziphawuleka futhi zivela ezinkampanini ezivelele okungukuthi, i-Equinix, Leaseweb & Internap.
Amaseva womkhosi axhunyiwe kwiziteshi eziphezulu ze-premium class futhi enza ukusebenza okukhulu okwenza le nsizakalo ibe yinto engcono kakhulu emakethe.
Isevisi Customer asivamile at Ukuhweba Fx VPS. Abo global ikhasimende base kuhlanganisa Algo Ukuhweba zamukelekile amafemu, abahwebi ngamunye kanye nezinye izikhungo zezimali.
Isinqumo sethu yayiyinhle futhi bakujabulele kakhulu nge thina Ukuhweba Fx VPS amasevisi.
Ungahlola kanjani i-Trading Fx VPS, noma iyiphi enye i-Forex VPS ne-MT4 latency?
Iningi labantu lihlola i-latency ngemilayezo ye-PING. Ngeshwa, imilayezo ye-PING inikeza izinyathelo ezinzima kuphela mayelana ne-latency kuzo zonke izinhlelo kanye nesikhathi esiningi esicabanga nge-latency yangempela. Okokuqala, imilayezo yokuhweba usebenzisa umlayezo womyalezo ohluke ngokuphelele ngokufuna okuhlukile kunethiwekhi nakwezingqalasizinda zehadiwe.
ubambezelo Sekukonke enqunywe:
Yeka ukuthi imiyalezo esheshayo (ngokuvamile i-TCP / IP hhayi i-ICMP njengemiyalezo ye-PING) ihamba ngezinethiwekhi phakathi kwezindawo ezimbili.
Yeka ukuthi lo logic yokudayisa ingashesha kanjani ukuqedela ukubalwa kwayo, okuyinto isofthiwe ne-hardware encike futhi ayikwazi ukulinganiswa ne-PING.
Yikuphi ukulibaziseka okwenziwe elinye iqembu ngenkathi kwenziwa.
Ngokwesibonelo kude olunembile kodwa yindlela umsindo xaxa ukuze avivinye real MT4 isethaphu ubambezelo ne indlela kuchaziwe ividiyo ngezansi kuka ukuthumela imilayezo Ping.
Chofoza lapha bese ulanda ubambezelo Tester for free!
Qiniseka ukuthi ngemva kokuqedwa azikho oda evuliwe noma izikhundla kwesokunxele in the MT4. Uma kwenzeka ufisa ukwenza isivivinyo-akhawunti bukhoma kuka kuphela ukukwenza ngentando yakho.
Njengoba kushiwo ngenhla, kwamakhasimende asivamile at Ukuhweba Fx VPS.
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni yokuhweba ye-Fx VPS - Ukusingathwa Okuhamba phambili Kwamahhala we-Forex VPS
Ukuze Ukuhweba yakho impumelelo,